အံဆုံး ပေါက်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ | Blogs | The Grand Dental
အံဆုံး ( Wisdom Teeth ) ပေါက်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ။
အံဆုံးသွား (Wisdom Teeth) ဆိုတာဘာလဲ ???
အံဆုံးသွားဆိုတာ အံသွား ၃ ချောင်းရှိသည့်အနက် နောက်ဆုံးမှပေါက်တဲ့ အံသွားပါ။ အများအားဖြင့် အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ အထက်အောက်ဘယ်ညာ အားလုံးပေါင်းရင် အံဆုံး ၄ ချောင်းရှိပါတယ်။ အံဆုံးသွား/ တတိယအံသွားများကို ပညာရှိသွားလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အံဆုံးက အသိဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်တဲ့
အရွယ်ဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၇ မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းပေါက်တဲ့ သွား ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ယခုခေတ် စားသောက်နေတဲ့အစာတွေဟာ ရှေးရှေးကျောက်ခေတ်ကလို မေးရိုးကိုအသုံးမပြုရတော့တဲ့အတွက် မေးရိုးများဟာ Generation အလိုက်သေးလာကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လူအများစုဟာ မေးရိုးတွင်အံဆုံးပေါက်ရန်နေရာ မလောက်သောကြောင့် အံဆုံးဟာလုံးဝထွက်မလာပဲ မေးရိုးထဲမှာပဲမြုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ထွက်လာလျှင်လည်း ခံတွင်း အနောက်ဘက်အား ဦးတည် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ပါးဘက်ကိုယိုင်ခြင်း ဘေးကပ်ရက်အံသွားအားဦးတည်ထွက်ပေါ်လာခြင်း စသည်ဖြင့် ပုံမှန်အနေအထား မဟုတ်ပဲထွက်လာတတ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းဖို့လဲမလွယ်ကူတော့ အံဆုံးနဲ့ ရှေ့အံသွားကြား အစာညပ်တာ များတဲ့အခါ သွားပိုးစားပြီး တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ရှေ့အံသွားကိုပါ့ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒုက္ခပေးတဲ့အံဆုံး ကို နှုတ်ရမှာလား? မနှုတ်လို့ကောမရဘူးလား? မနှုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ?
ဒုက္ခပေးတဲ့အံဆုံးကိုနှုတ်ကိုနှုတ်ရမှာပါ။ မနှုတ်လျင် ပထမဆုံး အံဆုံးနဲ့ရှေ့သွားကြား၊ အံဆုံးကိုဖုံးနေတဲ့သွားဖုံးကြားမှာ အစာတွေ ညှပ်မယ်။ သွားဖုံးကြီးရောင်လာမယ်။ မခံမရပ်နိုုင်အောင်နာလာမယ်။ ပြည်တည်လာမယ်။ ပါးစပ်ဟရခက်လာမယ်။ အစာမျိုရခက်မယ်။ နောက်ပိုင်း ရှေ့သွားပါပိုးစားလာမယ်။ အဲဒီအခြေအနေအထိ မကုသေးဘူးဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံး ရှေ့သွားပါ နှုတ်လိုက်ရတဲ့ အထိလည်း ဖြစ်သွားနိူင်ပါတယ်။
အံဆုံး နှုတ်လိုက်ရင် ဘယ်သွားနဲ့စားရမှာလဲ? ပြန်စိုက်ရမှာလား?
အံဆုံးက စားဖို့ဝါးဖို့၊ စကားသံပီသဖို့၊ အလှအပ မည့်သည့်ကဏ္ဍမှာမှ အသုံးမဝင်တဲ့သွားဖြစ်ပြီး နှုတ်ပြီးရင်လည်း ပြန်စိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ ပါးချိုင့်သွားမှာလည်းမပူရပါ။ အချိန်မီ ဖယ်ရှားနိုင်မှသာ ရှေ့အံသွားများ တကယ် ဝါးမည့် စားမည့် သွားများ အဖိုးတန်သော သွားများဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါမည်။
အံဆုံးဆိုတာ အိပ်နေတဲ့ကျားပါပဲ။ အမြဲတမ်းတော့ ဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူဒုက္ခပေးချင်တဲ့အချိန် ဒုက္ခပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အံဆုံးသွားဆိုတာ အံသွား ၃ ချောင်းရှိသည့်အနက် နောက်ဆုံးမှပေါက်တဲ့ အံသွားပါ။ အများအားဖြင့် အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ အထက်အောက်ဘယ်ညာ အားလုံးပေါင်းရင် အံဆုံး ၄ ချောင်းရှိပါတယ်။ အံဆုံးသွား/ တတိယအံသွားများကို ပညာရှိသွားလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသိဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်တဲ့
အရွယ်ဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၇ မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းပေါက်တဲ့ သွား ဖြစ်လို့ပါပဲ။ အံဆုံးသွားဆိုတာ အံသွား ၃ ချောင်းရှိသည့်အနက် နောက်ဆုံးမှပေါက်တဲ့ အံသွားပါ။ အများအားဖြင့် အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ အထက်အောက်ဘယ်ညာ အားလုံးပေါင်းရင် အံဆုံး ၄ ချောင်းရှိပါတယ်။ အံဆုံးသွား/ တတိယအံသွားများကို ပညာရှိသွားလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသိဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်တဲ့
အရွယ်ဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၇ မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းပေါက်တဲ့ သွား ဖြစ်လို့ပါပဲ။ အံဆုံးက စားဖို့ဝါးဖို့၊ စကားသံပီသဖို့၊ အလှအပ မည့်သည့်ကဏ္ဍမှာမှ အသုံးမဝင်တဲ့သွားဖြစ်ပြီး နှုတ်ပြီးရင်လည်း ပြန်စိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ ပါးချိုင့်သွားမှာလည်းမပူရပါ။ အချိန်မီ ဖယ်ရှားနိုင်မှသာ ရှေ့အံသွားများ တကယ် ဝါးမည့် စားမည့် သွားများ အဖိုးတန်သော သွားများဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါမည်။
အံဆုံးက စားဖို့ဝါးဖို့၊ စကားသံပီသဖို့၊ အလှအပ မည့်သည့်ကဏ္ဍမှာမှ အသုံးမဝင်တဲ့သွားဖြစ်ပြီး နှုတ်ပြီးရင်လည်း ပြန်စိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ ပါးချိုင့်သွားမှာလည်းမပူရပါ။ အချိန်မီ ဖယ်ရှားနိုင်မှသာ ရှေ့အံသွားများ တကယ် ဝါးမည့် စားမည့် သွားများ အဖိုးတန်သော သွားများဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါမည်။ယခုခေတ် စားသောက်နေတဲ့အစာတွေဟာ ရှေးရှေးကျောက်ခေတ်ကလို မေးရိုးကိုအသုံးမပြုရတော့တဲ့အတွက် မေးရိုးများဟာ Generation အလိုက်သေးလာကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လူအများစုဟာ မေးရိုးတွင်အံဆုံးပေါက်ရန်နေရာ မလောက်သောကြောင့် အံဆုံးဟာလုံးဝထွက်မလာပဲ မေးရိုးထဲမှာပဲမြုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ထွက်လာလျှင်လည်း ခံတွင်း အနောက်ဘက်အား ဦးတည် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ပါးဘက်ကိုယိုင်ခြင်း ဘေးကပ်ရက်အံသွားအားဦးတည်ထွက်ပေါ်လာခြင်း စသည်ဖြင့် ပုံမှန်အနေအထား မဟုတ်ပဲထွက်လာတတ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းဖို့လဲမလွယ်ကူတော့ အံဆုံးနဲ့ ရှေ့အံသွားကြား အစာညပ်တာ များတဲ့အခါ သွားပိုးစားပြီး တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ရှေ့အံသွားကိုပါ့ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။အံဆုံးက စားဖို့ဝါးဖို့၊ စကားသံပီသဖို့၊ အလှအပ မည့်သည့်ကဏ္ဍမှာမှ အသုံးမဝင်တဲ့သွားဖြစ်ပြီး နှုတ်ပြီးရင်လည်း ပြန်စိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ ပါးချိုင့်သွားမှာလည်းမပူရပါ။ အချိန်မီ ဖယ်ရှားနိုင်မှသာ ရှေ့အံသွားများ တကယ် ဝါးမည့် စားမည့် သွားများ အဖိုးတန်သော သွားများဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါမည်။ယခုခေတ် စားသောက်နေတဲ့အစာတွေဟာ ရှေးရှေးကျောက်ခေတ်ကလို မေးရိုးကိုအသုံးမပြုရတော့တဲ့အတွက် မေးရိုးများဟာ Generation အလိုက်သေးလာကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လူအများစုဟာ မေးရိုးတွင်အံဆုံးပေါက်ရန်နေရာ မလောက်သောကြောင့် အံဆုံးဟာလုံးဝထွက်မလာပဲ မေးရိုးထဲမှာပဲမြုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ထွက်လာလျှင်လည်း ခံတွင်း အနောက်ဘက်အား ဦးတည် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ပါးဘက်ကိုယိုင်ခြင်း ဘေးကပ်ရက်အံသွားအားဦးတည်ထွက်ပေါ်လာခြင်း စသည်ဖြင့် ပုံမှန်အနေအထား မဟုတ်ပဲထွက်လာတတ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းဖို့လဲမလွယ်ကူတော့ အံဆုံးနဲ့ ရှေ့အံသွားကြား အစာညပ်တာ များတဲ့အခါ သွားပိုးစားပြီး တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ရှေ့အံသွားကိုပါ့ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။